Iresiphi ye-Spaghetti ne-tuna
Indlu yasekhaya Ukupheka Okunye Izithako Inhlanzi I-Tuna
I-pasta ene-tuna ekheniwe Umbono ophakanyisiwe wokuthi i-bakery kanye ne-pasta okuvela kufulawa wekolweni yi-caloric kakhulu futhi iyaphanga isibalo asikho ngokuphelele. Uma usebenzisa i-macaroni ezinhlobonhlobo zekolweni kanye nesinkwa sonke sikakolweni, futhi isibalo sizobe sesihlelekile, futhi ngeke kudingeke uhlale ulambile. Izakhamuzi zichaza ukuthi nge-pasta ezivela kanzima izinhlobo zezinkozo azikho amafutha. Banamaprotheni amaningi emifino, futhi ama-carbohydrate ayaphula kancane kancane futhi angagcini ezindaweni eziyinkinga. E-Italy, isibonelo, kunomthetho okhethekile owenza umenzi ukuba angakhohlisi umthengi futhi abeke kahle kahle imikhiqizo yawo. Ngakho-ke, zonke lezo macaroni ezingezona eziqinile ezinkolweni izinhlobo zibizwa ngokuthi "pasta".
I-Spaghetti 400 g
I-canned ekheniwe 1 ingakwazi
Ama-Olive anethambo 100 g
Utamatisi ujusi 400 ml
Pepper emhlabathini omnyama 0.5 tsp.
Usawoti 0.5 tsp.
Amafutha omnqumo 3 tbsp. l.
Isinyathelo 1 Kulesi sidlo, thatha: i-spaghetti, i-tuna ekheniwe, iminqumo, i-parsley, i-garlic, amafutha omnqumo.
Isinyathelo 2 Hamba uqede ugarlikhi.
Isinyathelo sesi-3 Esikhathini sokushisa okufudumeleyo faka amafutha omncane ne-garlic gazinga kuwo kuze kube nsundu yegolide.
Isinyathelo 4 Dweba uketshezi embizeni ye-tuna bese uyibeka epanini lokuthosa. Hamba inhlanzi ngemfoloko. Fry the tuna ngemaminithi angu-5, evuselela njalo.
Isinyathelo 5 Engeza ijusi yetamatisi noma uthathe indawo nge utamatisi omusha.
Isinyathelo 6 Faka pepper emhlabathini omnyama, ikhava bese ubamba imizuzu engu-15.
Isinyathelo 7 Hlunga imifino.
Isinyathelo 8 Faka isiphuzo se-tomato.
Isinyathelo 9 Uma uthatha ama-oliva ngetshe - ungawakhipha ngengilazi encane, enezansi. Kusuka ekucindezelekeni okuqinile phakathi nendawo - umnqumo uvula futhi itshe lisuswa kalula.
Isinyathelo 10 Manje engeza iminqumo kumsanisi we-tomato, inkathi ngosawoti bese uxuba. I-Stew eminye imizuzu engama-5, susa ekushiseni bese uvumela isuphu imile.
Isinyathelo 11 Bilisa i-spaghetti. I-Macaroni kusuka ezinhlobonhlobo zikakolweni zipheka cishe imizuzu engu-8-10. Bese uthele amanzi kuwo, ngezingxenye, faka i-spaghetti kuma-plates kanye phezulu ne-tomato sauce ne-tuna. Khonza ushisayo.
Tuna ngehlobiso lamapheya
Isaladi nge-tuna kanye neqanda
Isaladi nge-beet, ushizi kanye ne-herring
I-recipe yabakwa-Sommes (i-Samos)
Isongo esihle se-beaded ngezandla zakho
Okubalulekile ukwazi ngezindawo zokupheka
Ukuhalalisela kakhulu futhi kumnandi ngokuzalwa komfowabo
Ama-mascots wemali ka-Feng Shui
Ziyini izinhlobo zezinwele zezinwele?
Umuthi womfashini waseFrance 2016, isithombe se-manicure-french
UBrynza wabhaka kuhhavini
Ikhekhe le-Easter neresiphi endala
Ubuchwepheshe besifazane obuthembisayo kakhulu
Amaphutha angu-8, avame ukuzenza emakilasini empilo
Kanjani ukuxabana nentsha?
Ukulahlekelwa nguNatalia Sturm kushuswe ngumzimba okhubazekile, isithombe
Izimonyo zemvelo ezenziwe ngezandla zomuntu siqu